Archive du 14-sept-2021
Minisitra Lalatiana mivady Tsy hametra-pialana fa miandry hotrongisina
Raharaha nitana ny sain’ny maro tao anatin’ny herinandro eo izao ny mahakasika ny minisitry ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy sy ny vadiny Andry Andratongarivo ary ny mpanakanto iray.
Sasatry ny mamafa
Sasatry ny mamafa adalana ve? Sasatry ny mamafa fepetra tsy voahevitra matetika sa fanapahan-kevitra tsy nosainina lalina?
Tontolon’ny fampianarana Olana goavana ny fandoavana ekolazy
Mitaraina fatratra noho ny fahasahiranan’ny Ray aman-dRenin’ny mpianatra ny ankamaroan’ireo sekoly tsy miankina eto amintsika.
Fakana an-keriny tao Antsirabe Tratra ireo namono sy nitetitetika ilay zazavavy
Nahitam-bokany indray ny ezaky ny mpitandro filaminana momba ny resaka fakana an-keriny tao Antsirabe, rehefa nokarohina nandritra ny 7 volana ireo mpanao ratsy.
Taom-baovao lohataona 2021 Tontosa tany Boeny ny andiany fahaefatra
Ny Faritra Boeny no nandray ny fankalazana ny “taom-baovao lohataona 2021” ny 10-12 septambra lasa teo.
Mahajanga Nitombo isa ny olona voan’ny VIH/SIDA
Nahitana fiakarana ny tahan’ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina VIH/SIDA any amin’ny faritra Boeny iny tao anatin’ny vanimpotoan’ny fihibohana raha
Coins jeunes TAFA Manohana ny tetikasa ACCESS ny Orange Madagascar
Mitondra ny anjara birikiny amin’ny programa ara-pahasalana ACCES (Accessible Continuum of Care and Essential Services Sustained
Toetr’andro Mbola hitohy anio ny ranon’erika
Telo andro hatramin’ny omaly no nisian’ny ranon’erika manify teto an-drenivohitra izay mandrafitra ny toetr’andro eto amintsika.
Toliara Hamidy amin'ny kapoaka “Nadco” ny vary
Efa hamidy amin’ny kapoaka « Madco », izay kely lavita noho ny kapoaka mahazatra ny vary any Toliara amin’izao fotoana izao.
Berija sy Rolly Mercia Mifoha ny fitakiana famoahana azy ireo
Manomboka mifoha amin’izao fotoana izao ny fitakiana ny famoahana ireo olona nogadrain’ny Fitondrana tamin’ny raharaha politika.
“Faux-cap” – Faritra Androy Nifandrombahana ilay fatina trozona
Trozona goavam-be iray no hita faty tany amin'ny faritra Androy ny faran’ny herinandro teo, izay nifandrombahan’ny olona ny fakana ny henany. Tao amoron’ny « Faux-cap»
Fanalefahana ny fitohanana Hidina ifotony hitety ny renivohitra ny polisy
Mahazo vahana tanteraka ny fitohanana eto an-drenivohitra sy ny manodidina amin’izao fidiran’ny mpianatra izao.
Antsirabe Sarona ireo mpamaky trano kalaza
Nisesy tato ho ato ny vaky trano tao Antsirabe, kanefa nahitam-bokany ihany koa ny ezaky ny Polisim-pirenena. Jiolahy nambara’ny mpitandro filaminana fa efa kalaza no
Sampana fifandraisana - oniversiten’Ankatso Miisa 3 sisa ireo mpampianatra raikitra
Vita teo ny taom-pianarana 2019-2020, hoy ny sojaben’ny Fakiolten’ny teny aman-tsoratra sy ny siantsa mahaolona eny amin’ny oniversiten’Antananarivo, ny Dr Fanja Tahina Ralinirina.
Kaomandin’ny zandarimariam-pirenena Nandray ny « Attaché de sécurité » an’ny Masoivoho Amerikana
Tonga nanao fitsidihana ara-pomba ofisialy ny Jeneraly Kaomandin'ny Zandarimariam-Pirenena Jeneraly Andry Rakotondrazaka ny « Attaché de sécurité »
Alatsinainy Ambazaha Nahazo tsena manara-penitra
Nahazo tsena manara-penitra ny kaominina Alatsinainy Ambazaha, distrikan’Antananarivo Atsimondrano. Omaly no notokanana tamim-pomba ofisialy izany mahazaka mpivarotra manodidina ny 160 isa.
Kaongresin’ny mpianatra isam-paritra Hangataka fihaonana amin’ny filoham-pirenena
Nanomboka omaly ary hifarana anio etsy Ankatso ny kaongresin’ireo mpianatra mpikaroka amin’ny faritany miisa 6 eto Madagasikara.
Toby Maki Andohatapenaka Drakaka tsy ara-dalàna 421 kg no sarona
Saron’ny foibe mpanara-maso ny Jono omaly 13 septambra 2021 teny amin’ny Tobim-piantsonan’ny fiara Maki
Kristianina mandinika raharaham-pirenena “Variana amin’ny ady politika isika”
Samy mandia fotoan-tsarotra ankehitriny na ny mpanohitra na ny mpitondra eto Madagasikara, hoy ny Kristianina mandinika raharaham-pirenena, Ralaiarimanana.